Gufgaf|Online पाँच प्रश्न: जब इक्जाम हलमै बेहोस भए नाजिर
अभिनेता नाजिर हुसेनको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा ‘कागजपत्र’ आज देखि प्रदर्शनमा आएको छ । प्रदर्शन अघि बिहिबार काठमाण्डौको क्युज हलमा सिनेमाको प्रिमियर गरिएको थियो । प्रिमियरमा सिनेमाका मुख्य कलाकार, पत्रकार र कर्पोरेट क्षेत्रका केही विशेष व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो ।
प्रिमियरमा सिनेमा हेरेका सबैले सिनेमा राम्रो भएको प्रतिकृया दिएका छन् । सिनेमा राम्रो भएको प्रतिकृया पाएपछि नाजिर पनि निकै खुशी देखिए । सिनेमामा नाजिरले गरेको कामको पनि तारिफ भईरहेको छ । आफ्नो अभिनयबाट सबैलाई मोहित बनाएका नाजिरलाई आज हामीले पाँच प्रश्न गरेका छौँ ।
तपाईँ के देखि डराउनु हुन्छ ?
मलाई धेरै कुराहरु छैन डर लाग्ने । तर म अलिकति ईमोशनल छु । यो कुरामा डर लाग्छ । अनि पछिल्लो समय मलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक प्रतिकृयाहरुले भने अलि तनाव दिएको छ । तर म कमेन्टबाट डराएकै भने छैन ।
जाँच दिन जाँदा केही लेख्न नसकेको पल छ कि छैन ?
त्यस्तो खासै त छैन । तर म बेहोस भएर भने ढलेको छु । मैले एसएलसी दुईपटक दिनु पर्यो । किनभन्दा मलाई पहिलो पटक एसएलसी हुँदा ठेउला आएको थियो । म ज्वरोले गलेको थिएँ । तै पनि मैले एसएलसी परीक्षा भने दिएको थिएँ । तर पास भईन । बिरामी भएकै कारण जाँच दिन जाँदा पटक पटक बेहोस पनि भएको छु त्यो बेला । म पहिलो पटक एसएलसी दिँदा दुईवटा विषयमा फेल भएँ । मैले त्यो समयमा लेखेरै भ्याउँदिनथे । तर मैले दोस्रो पटक चाहि राम्रो गरेँ । पछि ११ कक्षामा चाहि मैले कलेज नै टप गरेको थिएँ । खासमा त्यो पहिलो पटक एसएलसी पास गर्न नपाएको रिसले मैले ११ मा राम्रो गरेको थिएँ ।
तपाईँको पहिलो ब्रेकअप अनुभव कस्तो रह्यो ?
उहाँ विहे गरेर अहिले घर गृहस्थी सम्हालेर बसिरहनु भएको छ । म उहाँको नाम त लिन्न । तर म ब्रेकअप भएको ६ महिना चाहि एकदमै तनावमा थिएँ । कुुनै काममा पनि जाँदिनथे । घरमै बस्ने गर्थे । हुन त हाम्रो दुवैको सहमतीमा हामीले ब्रेकअप गरेका थियौँ । तर त्यसले केहि हदसम्म मलाई तनाव चाहि दिएको थियो । धेरै जसो महिलाहरुले चाहि सेटल्ड भईसकेको मान्छेसँगै विवाह गरेर जीवनको शुरुवात गर्न चाहनहुन्छ । अनि त्यसताका म संघर्ष गरिरहेको थिएँ । यहि कारण पनि हामी अलग भएका हौँ । हामी अलग भएको केही समय पछि उहाँले मलाई फोन गरेर म विहे गर्दैछु, तिमी फेरि मिडियाको मान्छे । अनि हाम्रो नाम जोडेर समाचारहरु आउँदा मेरो सम्बन्धमा असर त पर्ने होईन नि ? भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अनि मैले त्यतिबेलै उहाँलाई उहाँको नाम कहिल्यै पनि मिडियामा नल्याउने वाचा गरेको थिएँ । त्यहि भएर म उहाँको नाम त भन्दिन । तर ब्रेकअप हुँदा अलिअलि त मन दुख्ने रहेछ ।
गसिपले दुख दिएको छ कि छैन ?
हालसालै मात्र मलाई ईन्स्टाग्राममा फेक अकाउण्ट बनाएर मलाई गाली गरिरहनु भएको छ । तँ आतंकबादी हो तँलाई हामी मार्न चाहन्छौ भन्दै उहाँहरुले मलाई गाली गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले म मुस्लिम भएको कारण यस्तो गरिरहनु भएको हो । तँ यो सिनेमा उद्योग छोडेर जा हैन भने तँलाई हामी मार्छौँ भनिरहनु भएको छ । नाम र धर्ममा के राखिएको छ र ? मलाई अचम्म लाग्छ यस्तो देख्दा र भोग्नुपर्दा । यसका अलावा मेरो सिनेमा राज्जा रानीको बेलामा अभिनेत्री केकीसँग विवाह भएको खबर छापिएको थियो । खासमा सिनेमामा केकीसँग विवाह भएको थियो त्यसलाई समाचार बनाउँदा उहाँहरुले साँच्चिकै विवाह गरेको जस्तो बनाईदिनु भएको थियो । अनि मलाई त्यो खबर थाहा पाएपछि दाईले मलाई फोन गर्नु भएको थियो । यस बारेमा केकीले भने केही पनि भनिनन् । किनभने उनले पनि यो क्षेत्रलाई राम्ररी बुझिसकेकी छिन् ।
अन्त्यमा एउटा खानेकुराको रेसिपी भन्नुस न त ?
मलाई धेरै परिकारहरु पकाउन आउँछ । मेरो लागि सबैभन्दा रोमान्टिक ठाउँ किचेन नै हो । म अहिले तपाईँहरुलाई पालक पनिर बनाउन सिकाउन सक्छु । शुरुमा पालुङगोको साग र पनिर चाहियो । शुुरुमै तपाईँले पालकलाई मिक्स्चरमा मिक्स गरेर राख्नुस । अनि पनिरलाई पनि फ्राई गरेर राख्नुपर्छ ।
अनि मसालाहरुमा गरम मसाला अलिकति, जिरा, लसुन, प्याज टमाटर, धनियाँ, मेथि अनि खुर्सानी तपाईँले कत्तिको पिरो खानुहुन्छ त्यहि अनुसार ।
शुरुमा तेल तताउने । म चाहि सधैँ वलिभ वेल प्रयोग गर्छु किनकी त्यो अलिकति स्वस्थ पनि हुन्छ । यो अरु भन्दा स्वादिलो पनि हुन्छ । तताएको तेलमा मेथि पड्काउने, त्यसपछि जिरा अनि खुर्सानी हाल्नुस् । तेज पत्ता तपाईँले छुटाउनै नहुने कुरा । तेजपत्तालाई रातो हुनेगरी प्याजसँगै भुट्नु्स् ।
अनि यसमा मसालाको पेस्ट र टमाटर हालेर पकाउनेस् । अनि त्यसलाई मज्जाले पकाएर पेस्ट बनाईसकेपछि पनिर हाल्ने र दुई मिनेट जति पकाउने । अब पालो पालकको । अघि बनाएर राख्नु भएको पालकको पेस्ट त्यसमा हाल्ने र ५ मिनेट जति पकाउने । अब खानको लागि पालक पनिर तयार हुन्छ ।